Rudzi: Mimwe mabasa
Ndeapi mawati 1 ampere? kuverenga isimba remidziyo (semuenzaniso, 2 KW = 2000 W / 220 = 9,09 A) kana ini ndainzwisisa mubvunzo nemazvo, ndokuti, iyo yakasara yazvino redunhu breaker haifanire kunge iri shoma ...
Motokari yaAriston yakapunzika. Iyo inoratidzira inoratidza "F-02". Chii?
Motokari yaAriston yakapunzika. Iyo inoratidzira inoratidza "F-02". Chii? Takasvika tichibva kugungwa, tikabatidza wash kuna Ariston, kukanganisa F-02 kwakatanga kuratidzwa (dhiramu haina kutendeuka). Ini ndakazvifunga ndega - panguva yekuzorora, iro rabha chisimbiso ...
Maitiro ekunamatira iyo yakabvaruka SAWBUFERa mutauri? Kazhinji iyo yakajairwa nguva yakakodzera kune inonamira vatauri. Mubvunzo wese uri mukugadzirwa kweiyo sub uye nemhando yekukuvara. Izwi rinonyatso shanduka (nekungochinja iwo apfuura, iwe unogona kuwana akasiyana mabass) ...
Ndeipi nzvimbo yakanaka yekutenga zvemagetsi nemidziyo yemumba muMoscow? mu m video !!!! izvozvi hazvisi mu technosil uye mune Eldorado, schA gore idzva pane kutengeswa uye hafu yemidziyo yakashandiswa !!! batanidzo yakavharwa ne ...
Sevhisi "Nhamba nyowani".
Sevhisi "Nhamba nyowani". Masikati akanaka, Lena. Iyo "Nhamba nyowani" sevhisi inozivisa vese vanyoresa kuti iwe wachinja iyo nhamba. Paunodana nhare yako yekare, munhu anenge achinyoresa achanzwa kuti ...
Imhandoi yemidziyo iyo Surgitron ini yandinokurudzira kutarisa kuGreenland zvishandiso (RFS 3800K kana RFS4000K). Uyu mukwikwidzi weSurgitron. Iyo frequency iri zvakare 4 MHz, asi mutengo unodzivirira: http://www.adhara.ru/equipment/greenland.htm Surgitron - chishandiso cheredhiyo wave kuvhiya Radio ...
Taura yakanaka uye yakachipa online chitoro chemabhuku http://www.gumer.info/ Ini ndinotsvaga nekutenga zvese kungave pa knigalit.ru kana pa Liters. Dzimwe nguva ndinoirodha pasi kubva ku filibusta kuti iongororwe, uye ndobva ndatenga maererano nemamiriro ezvinhu ...
Chii chinonzi Chinogadzira Kugadzira? Kugadzirwa kwezvigadzirwa, chimiro chekugadzirwa kwenzanga umo zvigadzirwa zvinogadzirwa kwete zvekushandisa kwavo, asi kuchinjanisa; inomuka pahwaro hwekugovaniswa kwevanhu munharaunda, kunoitiswa nehupfumi hwakazvimiririra ...
Ndibatsirei ini kuti ndiuye nezita remusangano wekugadzira ndapota! "Emerald Mountain" kana "Mistress weEmerald Mountain" handizive kuti sei, asi izvi chete zvinouya mupfungwa, mushure meKati Leopold neMwedzi Ruva. ... Kugadzira zvakanaka ……
Chii chinonzi TDKS uye ndeyei? Tsananguro Yakagadzirirwa kushanda mumutsara scan kuburitsa nhanho yevanogamuchira terevhizheni. TDKS - Transformer Diode - Cascade Linear, inoshanda kuumba magetsi ekupa ...
Ndezvipi zvigadzirwa pane ebay kana aliexpress zvakachipa? kunyanya kune vese vanofarira zvemagetsi nehembe dzaAli.Kana iwo mhando iri yemhando isina kunaka, saka Aliexpress, pane ebay unogona kuwana yakanaka yakashongedzwa zvipfeko zvisimbiso zvekuvaka dzimba dzematanda ...
ndeupi musiyano wevane 8 ohm kana 4 ohm vatauri? kuramba kwacho kwakasiyana pane imwe neimwe frequency, uye zviyero zvinowanzoitwa pahuwandu hwe1000 Hz. Vagadziri vemutauri vanoratidza zvakare pakati-pasiringi ...
Ini ndakaraira chigadzirwa kubva kune Aliexpress webhusaiti. Pasuru yacho haigone kuteverwa kwemazuva gumi! Kana yako track ikasatanga ne tsamba R, saka haisi KUNYORA. Nzira dzeNyika dzinogona kuteverwa ivo vari mu ...
Tsamba kubva kuImperial Mint. Kurambana here kana kuti kwete? Uye chisimbiso chaMambo pachake chaive? Nicholas II? Iyo Imperial Mint hofisi nyowani inoshandira vateresi veazvino manhamba zvinhu. Mari uye ...
Mumwe munhu akashandisa Lety kodhi pane iyo Letyshops webhusaiti? DOUBLE2DAYS Yakazvishandisa, uye chaizvo zvinobudirira. Nehurombo, hapachina macode matsva eakaviri mari kumashure izvozvi ... Ndinoziva kodhi yekushanda yeakaviri mari back backgirl-a (iye ndewangu, wake ...
Pasuru iyi yakarasika mudunhu reRussia Mai Mikheeva, dai ndaive iwe ndingadai ndakakunda makakatanwa mazhinji. Kuchengeta chinhu SYL21226593MYPostal chinhu (Malaysia Post) Zuva Mamiriro Nzvimbo25-05-2015 14:42 Malaysia Post Dispatch PreAlert ku…
Chii chinonzi kutanga kwemagineti uye chii chayo musimboti wekushanda? Iyo magnetic starter chishandiso chinoshandira chakagadzirirwa kutonga kure kweinotenderedza squirrel keji mota nezvimwe zvigadzirwa. Electromagnetic anotangisa akagadzirwa ...
Iyo yakachipa pasa tekisi muRostov. Ndeipi tekisi yakachipa kwazvo muRostov-on-Don? Yakachipa pane Uber uye Gett haisati yauya nayo! Mushure mekuisa mashandisiro pane yako smartphone, isa kodhi yekusimudzira kuti uwane mahara kukwira: Uber:…
Ndezvipi zvinhu matoyi akapfava anowanzo gadzirwa? Chidhori chakapfava chinowanzo gadzirwa nehuswa kana imwe jira rakapfava, rakazara nezvinhu zvakapfava uye rakagadzirirwa kutamba. Pamicheka yese yakapfava ...
Tiudze. sei kutumira mari pakutakura zvinhu neposvo. nhanho nhanho maitiro akaomesesa. iwe unoda angangoita 2, uye zvakanyanya 3 dzidzo yepamusoro. mbichana mbichana ... asi pachangu kuvanhu vakaita semi, ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,610 masekondi.